Focus Beauty မှ ယိုးဒယားနိုင်ငံတွင် ထုတ်လုပ် တင်သွင်းဖြန့်ချီသော Better Skin Soap သည် မြန်မာနိုင်ငံ FDA မှ FDA No. MN200428693 ဖြင့် စစ်ဆေးခွင့်ပြုချက်ရရှိပြီးဖြစ်သောကြောင့် စိတ်ချယုံကြည်စွာ အသုံးပြု နိုင်ပါသည်.
Focus Beauty မှ ကိုးရီးယားနိုင်ငံတွင် ထုတ်လုပ် တင်သွင်းဖြန့်ချီသော 💎New Skiin Whitening Mask💎 သည် မြန်မာနိုင်ငံ FDA မှ FDA No. MN191023849 ဖြင့် စစ်ဆေးခွင့်ပြုချက်ရရှိပြီးဖြစ်သောကြောင့် စိတ်ချယုံကြည်စွာ အသုံးပြု နိုင်ပါသည်.
Focus Beauty မှ India နိုင်ငံတွင် ထုတ်လုပ် တင်သွင်းဖြန့်ချီသော 💎New Skiin Supplement💎 သည် မြန်မာနိုင်ငံ FDA မှ FDA No. IR-F/2020-B1/069 ဖြင့် စစ်ဆေးခွင့်ပြုချက်ရရှိပြီးဖြစ်သောကြောင့် စိတ်ချယုံကြည်စွာ အသုံးပြု နိုင်ပါသည်.
Focus Beauty မှ ကိုးရီးယားနိုင်ငံတွင် ထုတ်လုပ် တင်သွင်းဖြန့်ချီသော 💎New Skiin All In One Tone Up Cream💎 သည် မြန်မာနိုင်ငံ FDA မှ FDA No. MN191023848 ဖြင့် စစ်ဆေးခွင့်ပြုချက်ရရှိပြီးဖြစ်သောကြောင့် စိတ်ချယုံကြည်စွာ အသုံးပြု နိုင်ပါသည်.
Focus Beauty မှ တင်သွင်းဖြန့်ချီသော 🐌Snail Wish Whitening Cream🐌 သည် မြန်မာနိုင်ငံ FDA မှ FDA No. MN190822680 ဖြင့် စစ်ဆေးခွင့်ပြုချက်ရရှိပြီးဖြစ်သောကြောင့် စိတ်ချယုံကြည်စွာ အသုံးပြု နိုင်ပါသည်.